အလိမ်ခံရတဲ့ ” မြေစာပင်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အလိမ်ခံရတဲ့ ” မြေစာပင်”
အလိမ်ခံရတဲ့ ” မြေစာပင်”
Posted by Gomenasai on Oct 27, 2010 in News |9comments
mGဆိုတဲ့အကို လား ညီလား ရေးထားတဲ့ ဆန္ဒပြုချက်များ ( X ) ဆို တဲ့ပိုစ့်ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် မသိသေးတဲ့( မသိချင်တော့တဲ့) ပါတီနိုင်ငံရေး တွေအကြောင်း သိလိုက်ရပါပြီ။ ကျေးဇူးလဲတင်ပါ တယ်။ပိုစ့်အောက်ဖက်မှာcomments တွေလဲတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲကတစ်ခုကိုကျနော် ဘဝင်မကျမိပါဘူးခင်ဗျာ။
((((((။စိတ်နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့…။ကျွန်တော်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဝင် တဦးပါ။ခင်ဗျာမှာတောင် အဲ့လိုအောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဒီအဖွဲ့ထဲကို ၀င်ဖို့ သတ္တိရှိပါ့မလား။ရှိမယ်မထင်ပါ။ခင်ဗျာလိုလူမျိုးက ရုပ်မပြရဲပဲပြောနေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ NLD ကိုယ်စား၊၈၈ ကျောင်းသားတွေ နဲ့ပေါင်းပြီး စာစောင်တွေ ဝေတုန်းက ခင်ဗျာတို့လို လူမျိုးတွေ လိုအပ်တယ်။ဘယ်များရောက်နေတာလည်း။အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ စောင်ခြုံမအော်နဲ့ အစဉ်မပြေနိုင်ဘူး။)))))))
အရင်ဆုံး ကျနော်အကြောင်း နဲနဲပြောပရစေ။ အရင်တုန်းကကျနော် ကိုတိုင် ပါတီနိုင်ငံရေး တွေအကြောင်း ကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ ကာလကို တော့မမီ လိုက်ပါဘူး။ အားလုံးမှတ်မိ ကြ မဲ့ ”ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှူ” ကိုတော့ သိမိလိုက်ပါတယ်။ကိုတိုင်လဲ တစ်နည်းတစ်ဖုန် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ ပုံ ကိုနဲနဲတင်ပြပါရစေ။ အဲဒီ တုန်းက လဲအခုကာလ(ခုလောလောဆယ်)လို ပဲ၊ အင်တာနက်၊ ရေဒီယို တို့မှာ တော်တော်လေးကိုဖွ(အဲလိုပဲပြောပရစေ) ကြပါတယ်။ နဂိုကထဲက နိုင်ငံရေး ပိုးလေး ရှိတဲ့ ကျနော် နဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း တစ်စုလဲ ပါဝင်ခဲ့ ကြပါတယ်(ချီတက်ဆန်ဒပြကြတယ်ပေါ့)။ အဲဒီချီတက်မှုကြီး မှာ ကို့ထက်အသက်အားဖြင့် ရော၊ဝါအားဖြင့်ပါ ကြီး တဲ့သူတချို့နဲ့လဲ ခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။
သိကြတဲ့ အတိုင်းပါ၊ မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီချီတက်မှုကြီး ဟာ ယမ်းသံ၊ သနပ်သံတွေ၊ ကျည်ဖူးတွေ ရဲ့အောက်မှာနိဂုံးချုပ် ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ခုချိန် မှာအင်တာနက် ပေါ်စာရေး လို့ရ အောင် ကံကောင်း နေပေမဲ့ ကံ ဆိုးတဲ့ ကျနော် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက ကတော့အဲဒီ နေ့ထဲ က ဧည့်အိမ်ကိုမပြန် နိုင်တော့ပါဘူး။ ခွေးပြေး၊ဝက်ပြေး ပြေးနေတဲ့အဲဒီ အချိန် တုံးက ကျနော့ ခေါင်းထဲမှာ ဘာပါတီနိုင်ငံရေး မှမရှိတော့ပါဘူး။
” ကျနော်တို့ အလိမ် ခံလိုက်ရပြီ” ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ အလိမ် ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ အင်တာနက်၊ ရေဒီယို တို့မှာ ဖွခဲ့တဲ့သူ တွေကရော အဲဒီအချိန်မှာဘာလုပ် နေကျပါသလဲ။TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေ ဘောလုံး ပွဲတစ်ခုကြည့် နေသလိုပဲကြည့်နေကြတာလာ၊ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆိုတဲ့ အန်တီ ကရော ဘာလုပ် နေတုံး။
”ကျနော်တို့က နိုင်ငံခြားရောက် နေလို့၊ စားဝတ်နေ ရေးကရှိသေးလို့၊မိသားစု ကိုငဲ့နေရလို့၊ အသက်ကြီး သွားလို့” ဆိုတာ တွေပဲလား၊၊ တစ်ကယ်စိတ်ပါရင် နိုင်ငံခြားရောက် နေလဲ ပြန်လာပါ(ဝင်ခွင့်မပေးလို့လား၊နာဂစ် မုန်တိုင်းကြီး တုံးကလဲနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့တကယ် ကူညီချင် တဲ့သူတို့က ရအောင် ခိုးဝင်ပီးကူညီခဲ့ကြပါတယ်)။
စားဝတ်နေရေး၊မိသားစု ရေးလား၊ လူသားအားလုံးစားဝတ်နေရေး၊မိသားစု ရေး ရှိကြတာပဲ၊ အသက်ကြီး သွားလို့ပဲလား၊ အဲဒီချီတက်မှုကြီး မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တစ်ချို့ပုဂ္ဂိုယ် တွေကခုနှစ်ဆယ်ကျော် တန်းတွေ ပါပါတယ်။
အဲဒီချီတက်မှုကြီး မှာလူတော်တော်များများ သေကြေပျက်စီး ခဲ့ရပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူ တွေလဲခံရပေါ့။ အဲဒီအဖမ်းခံရဆိုတာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးက အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း ရအဖမ်းခံရတာပါ။နောက်တစ်မျိုးကတော့ ”ရောချ” တွေဖမ်းတာပါ။ ၈၈ တုန်းကလဲ ဒီလို ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ အခြေအနေ တွေကို အခွင့်ကောင်းယူ ပြီးလူသတ် ၊လုယက် တာ တွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ခုလဲအဲဒီလိုပါပဲ။ အဲဒီရောချ တွေက လူတွေကိုဖမ်း သုံးလို့ရမဲ့သူ ဆိုပြည့်tတန်ာ အဖြစ် ရောင်းစား ပါတယ်၊ အဲကျန်တဲ့ လူအားလုံးကိုတော့ ပါးမှာ တံဆိပ် ခတ်၊ လက်တွေအားလုံး ပူးချည်၊ လည်ပင်း မှာ(ကျွဲ၊နွား တွေကို ချည်သလို) ချည်၊လက်နက် ကိုင် အစောင့်များ နဲ့ နယ်စပ် ကနေတဆင့် ရောင်းစား ပါတယ်။ကျွဲ၊နွား တွေ ရောင်းသလိုရောင်းတာပါ။ ဒီတိုင်းလူလို သူလို လေယဉ်ကြီးစီး ပြီးအလုပ် သွားလုပ်တဲ့သူတွေ တောင်ဒီလောက် အနိမ် ခံရတာ၊ ဒီကျွဲ၊နွား တွေ ရောင်းသလိုရောင်း စားခံရတဲ့သူတွေ တော့ စဉ်းစား သာကြည့်ပါတော့။
ကျနော်ပြောတာ ကဘယ်သူမှန် ဘယ်သူမှား မဟုတ် ပါဘူး။ ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကို ပြောပြတာပါ။ အစိုးရ ကလိမ်တယ်၊ညာတယ်ဆိုတာတော့ ကြာပါပြီ။ (အဲဒါကိုမကြိုက်လို့ ကိုတိုင်လဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါပြီ)။ ဒါဆို အန်တီစု ကရော။ ဟုတ်ကဲ့ အန်တီလိမ်နေ တာလဲကြာပါပြီ။ အန်တီရောက်လာ ထဲက ဒီမိုကရေစီ နဲ့တစ်စီ ထဲစီနေတာ ကျန်တဲ့ အမျိုးသား ကောင်းစား ရေး တွေကြ ဘာလို့ မပြောတုန်း။ ပိတ်စို့မှု တွေလုပ် ခိုင်းတော့ ဘယ်သူကြီး ပွါးသွားလဲ၊ ပြည်သူလား ဟိုအကောင်တွေလား၊ အန်တီအဲဒါ တွေကိုမမြင်တာ လာ ၊ မမြင်တတ် တာလား။
ကဲ အမျိုးသားကောင်းစား ရေး ရောအန်တီဘာလုပ်ပြီး ပြီလဲ။ ကလေးတွေ စည်းကမ်းရှိကြ၊ ကျိုးစားကြ၊လူကြီးမိဘ ရိုသေကြ၊ ((( တိုင်းတပါးသား ကို အထင်မကြီးနဲ့))) ဆိုတာမျိုး ပြောပြီးပြီလား။
ဒါနဲ့ အန်တီနဲ့ အကြောင်းပါခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားကြီးတောင်မရှိတော့ဘူးနော်။ သူနဲ့ရောဘယ်လို အကြောင်းပါခဲ့ တာလဲ။ အချစ်လား။ True Love လား။ အန်တီဟာ တိုင်းတပါးသားတွေ ကို မိမိကိုကျိုးစွန့် ၊အသက်ကိုစွန့် ၊အရာရာကိုစွန့်ပီး တော်လှန်ခဲ့ တဲ့ တကဲ့ အာဇာနည် ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ သမီး အရင်းပါ။( အန်တီကို ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့သမီး ဆိုပြီး ကြည်ညိုတဲ့သူတွေမနဲပါ။ ကျနော်လဲပါခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ် က မိဘတွေသိမ်း ထားတဲ့ သတင်းစာ တွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် ရဲ့သမီး ထူးချွန်ဆုတွေယူနေတဲ့ပုံတွေက ကျနော့ မှတ်ညဏ် ထဲမှာ လေးစား အတုယူစရာ ကောင်းပါတယ်)ခုရော အန်တီကို အတု ယူ ကြရမှာပါလား။ သူနဲ့မင်ဂလာ ဆောင်စဉ် တုန်းကရော ဖခင်ကြီးကို သတိ ရပါရဲ့လား။(ဖခင် ကြီးရှိရင်ရော သဘောတူ မှာလား).(True Love လား။ (ကိုရီးယား ကားနဲ့ရောသွားလို့ပါ) ရှေးရှေးထဲ ကအာဇာနည် ကြီး၊ ခေါင်းဆောင် ကောင်းတွေဟာ အရာရာကိုစွန့်လွတ် အနစ်နာခံတတ်ကြပါတယ်။)
ဒါဆိုအန်တီ လုပ်နိုင်တာဘာလဲ။ မြန်မာပြည်ကိုနာဂစ် ကြီး ဝင်တုန်းကရော၊ ရေဒီယို ကနေ စစ်အစိုး ရအသုံးမကျ တာ၊ လူတွေကိုပစ် ထားတာ၊ စတဲ့လူတွေသိပီး သားအကြောင်းတွေအော် နေတာကလွဲလို့ တခြားရော။ အချုပ်ခံ ထားရလို့လား၊ ကိုတိုင်မဟုတ်လဲ နောက်လိုက်တွေကိုခိုင်းလို့ရပါတယ်၊ ပြည်ပကို ပိတ်ဆို့ ခိုင်းတုန်းကလို ပဲ အကူအညီတောင်းလို့ ရပါတယ်။
ဒါတွေက ကျနော့ အမြင် အတွေး သက်သက်သာ ဖြစ်လို့ အများနဲ့ကွဲလွဲနေနိုင်ပါတယ်၊ အားလုံးပဲလွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အလိမ်ခံရပြီး လို့ ခွေးပြေး ဝက်ပြေးလဲပြေးခဲ့ပီး ပါပြီ။ (ခွေးသေ၊ဝက် သေ သေ တဲ့သူတွေ၊ ကျွဲလိုနွားလို အရောင်းစားခံ အခိုင်း ခံနေရတဲ့သူတွေလဲမ နဲပါဘူး) ။အားလုံးက ” မြေစာပင်” လေးတွေပါ။
ဘယ်သူ မှန်မှန်၊ ဘယ်သူမှားမှား ကျနော်က တော့ ((ဘယ်သူတွေကသတ္တိရှိ တယ်၊မရှိ ဘူးပြောပြော)) အလိမ်ခံရတဲ့ ” မြေစာပင်” လေးဘဝကိုတော့ ထပ် မရောက်ချင် တော့တာ အမှန်ပင်။
mGရေးထားတဲ့ Commentလေးကို ကျနော် နဲနဲလောက် ထပ် ဖြည့်ရေးချင်ပါတယ်။(စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့)
October 27, 2010 at 5:51 pm · Reply
ကျနော် ကိုယ်စားထပ် ဖြည့်ရေးချင်တာကဒီလိုလေးပါ ” ကဲငါတော့ မင်းတို့ကို ပြောချင်တာ၊မှာချင်တာ တွေပြောပြီးပြီ၊ ကျန်တာမင်းတို့ဆက် လုပ်၊ ငါတော့ မိသားစုကရှိသေးတယ်ကွ” ဟူ၍ …}}}}}}
-လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ချင်း ကင်းဝေးကြ ပါစေ။ ။-
မင်းက အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဒေါ်စုကိုတောင် တက်ဝေဖန်ရဲတော့ တော်တော်လေးကို နိုင်ငံရေးကို နားလည်တတ်ကျွမ်း ပုံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးက ၁၉၈၈ ကထဲက ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးကိုပဲ ပြန်ဖွင့်နေတာဆိုတော့ အသစ်လေးဘာလေး ထွင်ပါအုံးကွာ။ တခါလာလည်း ဒေါ်စုရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပဲ၊ နောက်တခါလာလည်း ဒါပဲ။ မင်းလေ့လာထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဒါလားကွာ၊ ဒါမှမဟုတ် မင်းဆရာကြီးတွေက ဒါတွေပဲ သင်ထားလို့လား။ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် တွေလုပ်စမ်းပါ။ အင်တာနက်ကိုသုံးတတ်မှတော့ အတွေးအခေါ်ကလည်း နဲနဲတော့ မြင့်သင့်ပါတယ်။ မင်းပြောတာတွေက ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘာအပြုသဘောမှလည်း မပါဘူး။ မင်းပြောသလို တကယ်ဘဝစွန့်လုပ်ခဲသူတွေက တဦးမှ မင်းလို နတ်ကတော်လို မြေစာပင်လို့မပြောဘူး။ ခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့သူ တွေအပေါ် မကျေနပ်ချက်တွေကို ပြောရင်ပြောမယ်၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လမ်းကြောင်းကို တမျိုးပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အနာမခံနိုင်တော့ရင်တောင်မှ ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တာကို သာမန်ပြည်သူ တဦးအနေနဲ့ လုပ်မယ်။ မင်းလိုတော့ ပြောတာမတွေ့လို့ အင်း…တခုခုတော့ မှားနေပြီလို့…
(လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ချင်း ကင်းဝေးကြ ပါစေ)
မင်းကလည်း တီးလုံးလေးဘာလေး ထည့်လေကွာ ပြေသာပြောတာပါ မင်းမေတ္တာပို့ က
တပ်ချုပ်ကြီး ပုတီးစိတ်သလောက် မညက်ဘူးဖြစ်နေတယ် အောင်ပုဆိုတဲ့ကောင်ပြောတာကို သွားမယုံနဲ့ဒီကောင်ငပေါ
အင်တာနက်ထဲက ကောင်တွေက ဖွတ်ကြားတွေပါလို့ပြောတာ မင်းတို့ အားလုံးကို စော်ကားလိုက်တာ မခံနဲ့ ပြန်ဆဲ
ကိုbigcatကခုလို သဘောထားကွဲ လဲ တာလဲကောင်းပါတယ်။ ကိုbigcatပြောတာဟုတ်မှာပါ၊ Internet သုံးပြီးကျနော်ကညာဏ်နဲနေပုံ၊ ရပါတယ်။ ကို bigcatကတော့ နိုင်ငံခြား မှာနေနေတာဆိုတော့ ညာဏ်တော်တော် ကောင်းမှာပေါ့နော်။အဲ အကိုရဲ. ”ဒုတ်ဒုတ်ချင်း ဒိုင်းဒိုင်းချင်း Homo” ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးကိုကြည့်ပြီး အကို့ရဲ့ လိမ်တူတွေအပေါ် (အနဲငယ်) စိတ်ဝင်စားမှုကို ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကိုပဲအသုံးပြုပုံနားလယ်မဲ့ ချောဆီလေး ကိုတော့ အကိုပဲ လိုရမယ်ရဆောင်ထားလိုက်ပါ။ ကိုကာကိုလာသောက် ဟမ်ဘာဂါစားရင်း၊ချောဆီလေး နဲ့ ကိုbigcat တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှာ ဇိမ်ကောင်းကောင်းခံနိုင်ပါစေ။ ။
ကိုချစ်စရာ ခင်ဗျာ၊ အကို ပြောသလိုဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကိုbigcatက လိုင်းတွေကျ ပြီး အဆက်အသွယ်တွေပြတ် နေလို့ နဲနဲဒေါသထွက်နေတာထင်ပါတယ်။
ကျနော်ရေးတာကလဲအန်တီစု ကိုတော်တော်ဝေဖန် မိတာလဲပါမှာပါ။ နောက်တစ်ခါ စစ်အစိုးရ ကိုပက်ပက်စက်စက်ဖေန်တဲ့ Postအခါကြရင်တော့ Comment ကောင်းကောင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော Internet သုံးနေတဲ့ဖွတ်ကြားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားက ညဏ်ကြီးရှင်ကြီး ပဲဖြစ်ဖြစ် Internet အခြေခံ ယဉ်ကျေးမှု တော့ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
(နောက်တစ်ခါ စစ်အစိုးရ ကိုပက်ပက်စက်စက်ဝေဖန်တဲ့ Postအခါကြရင်တော့ Comment ကောင်းကောင်းတွေကိုတွေ့ ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်)
ကိုယ့်အလုပ်က Comment ကောင်းကောင်းရဘို့ မဟုတ်ဘူးလေကွာ စစ်အစိုးရ ကိုပက်ပက်စက်စက်ဖန်ပြ ပြီးရင် ဒီစစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချမယ့် ပါတီတွေကို ပြည်သူတွေက မဲပေးကြ လို့ ပြောလိုက်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီး အထမြောက်သွားတော့
ဟိုထမီဝတ်ထားတဲ့အဖွားကြီးလဲ လွတ် သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီးလည်း နေသာထိုင်သာရှိ
ရှင်းပြပါရစေ။ ဒေါာစု အင်န်အယ်လ်ဒီ နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်နည်းဟာ passive non-violent non-cooperative ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းဘဲ။ ၂၁ ရာစုမှာလူသားတွေယဉ်ပါးလာပြီး အကျမ်းဘက်နည်းလမ်းတွေကိုရှုတ်ချလာကြတယ်။ အကျမ်းဘက်လက်နက်အားကိုးတဲ့စစ်အစိုးရကိုဒီလိုအနုနည်းနဲ့ချော့လို့မရဘူး။ ဒုတ်ဒုတ်ချင်းဒါးဒါးချင်းဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုသာနားလည်တဲ့စစ်ငမိုက်သားများကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ဆုံးမမှရတယ်ဆိုတာကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဟစ်တလာ ဆာဒမ်ဟူစိန်တို့ရဲ့ဇါတ်သိမ်းခန်းများကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်။
ဒေါာအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည်ငြိုလေးစားမှု ပြည်သူလူထုရဲ့စုပေါက်းဆန္ဒပြမှုတို့ကြောင့်အကြမ်းဘက်နက်နည်းကိုမသုံးရဘဲဖိအားပေးမှုပေါင်းစုံကြောင့်ဗိုလ်သန်းရွှေ အခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးရတဲ့အဆင့်ရောက်ပါပြီ။ ဒီလမ်းမှာအာဇာနည်အမြောက်အများအသက်ပေးခဲ့ရတယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းအမြောက်အများလဲဘဝအပျက်ခံလူညွန့်အတုံးခံ့ ထောင်နန်းစံနေကြတယ်။ ဒါတွေဟာအလကားဖြစ်မသွားလို့ အလိမ်ခံရတာလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ အာဏာရှင်ကိုအနုနည်းနဲ့တိုက်ရင်နှစ်ရှည်လများလူတွေအသေခံအဖမ်းခံအနှိပ်စက်ခံစီးပွါးပျက်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနဲ့စိတ်ပျက်မယ်ဆိုရင်လဲဖြစ်စရာပါဘဲ။ အရှုံးပေးလိုက်လို့ကတော့ ဗိုလ်သန်းရွှေဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲအကျဘဲ။ လူထုအားကိုယုံကြည်ပါ။အခုရွေးကောက်ပွဲဟာကျနော်တို့လူထုအားကိုသုံးဘို့နည်းတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူဲး။ စစ်တပ်က ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာသေနတ်လက်နက်သုံးပြီးအတင်းအဓမ္မမဲထဲ့ခိုင်းလို့မရဘူး။ တကမ္ဘာလုံးမြန်မာပြည်ကိုမီးမှောင်းထိုးထားတဲ့နေ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲနေ့ဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေ အားအနည်းဆုံး သူအကြောက်ဆုံးနေ့ဘဲ။ သံတမာန်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီကောင်လူကောင်းရောင်ဆောင်နေရတော့လှုပ်တောင်မလှုပ်ရဲဘူး။ ဒီကောင်သိပ်ကြောက်တပ်လို့ လူတွေကိုနည်းမျိုးစု့ဖိနှိပ်ချိမ်းချောက်နေတာကို ကြောက်မနေပါနဲ.။စည်းလုံးညီညွတ်ပြီးလူထုအားနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ပြီး ကမ္ဘာကို ဗလာလူသူမဲ့မဲရုံများပြပြီး သန်းရွှေကိုအသေအလဲထိုးကြပါစို့။ Wake up Burma, Boycott the Election မှာကျနော်ရေးသားနှိုးဆော်ထားတာကိုလဲဖတ်ကြည်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါဘဲ။
Post နဲ့ပတ်သက်လို့ သုံးသပ် အကြံပေးပါရစေ။အန်တီစု နဲ့ပတ်သက်လို့စပြောပြပါ့မယ်။အန်တီစု ဟာသူ့ခင်ပွန်းတွေနဲ့ကလေးတွေ မိသားစု တစုလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို သူအရောက်ပြန်လာပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ ကိုရအောင်လုပ်ပေးမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမိုကရေစီလမ်းညွှန်တွေက လူတိုင်းသိပြီးထားပါ…။
“ရွှေရောင်တော်လှန်ရေး” မှာအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေရယ်၊အသက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေရယ် အားလုံးထဲမှာ အန်တီစုရဲ့ ပါတီဝင်တွေ အများဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဘာဖြစ်လုိ့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခံယူထားပြီးထားပါ။ပြည်သူတွေဘက်ကို လှည့်လာတဲ့ သေနက်ပြောင်းတန်တွေကို ကျွန်တော်တို့တွေက ဖယ်ထုတ်မပေးနိုင်ရင်တောင် မိမိရဲ့အသက်ကို စတေးခဲ့ကြတာပါ။ဒါတွေအားလုံးကို ပြည်သူတွေကို ပြောပြလို့တော့ ဘာမှမထူးပါဘူးဗျာ..။ဒါပေမဲ့ မိမိတို့ ဘက်က အသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့တာတွေကို ပြည်သူတွေသိလာတော့ အန်တီစု ဘက်ကနေယနေ့အထိ ကာကွယ်အားပေးခဲ့ကြတာပါ။
ပြည်သူတွေထဲမှာလည်း နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီ ကိုတာအားရုံထားစေချင်ပါတယ်။မိမိတို့အား ကယ်တင်ပေးဖို့ အန်တီစု ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ အိပ်နေလို့တော့ အစဉ်မပြေပါဘူးဗျာ…..။သင်တို့ စိတ်ထဲမှတ်ယူထားရမှာက ဒီမိုကရေစီ နဲ့ တရာမျှတမှု ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်ဆက်မှုတွေကို ပပျောက်နိုင်ဖို့ရယ်…လူအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ရဖို့ကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်းသူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။အန်တီစု နဲ့ ပါတီဝင်တွေဆိုတာကလည်း လမ်းစဉ်တွေကို မပျောက်ပျက်သွားအောင် လမ်းညွှန်စံပြလုပ်ပေးထားတာပါ။
ကျွန်ုပ်၏ဆွေးနွေးမှုတွေကို အရေးပေး လေ့လာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ရင်တွင်စကားတွေပါ။လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇုးတင်ပါတယ်။